Semalt: Nzira Yakanakisisa Yokutsvaga Website
Website Kugadzira haisi basa rakaoma. Kune nyanzvi dzakawanda nhasi dzinonyatsoziva kuti ingabatsira sei vashandisi kuti vaunganidze dhese ravanoda nekamwe chete bhodha. Iyo nzira itsva uye inobudirira, uye vakawanda vanoongorora webhu vanoishandisa iyo kuti vaunganidze mashoko ose ehurumende kuti vakurire vadzikwi vavo uye kusimbisa kushanda kwekambani yavo. Kutaura zvazviri, vanogona kuwana dhamusi zhinji, sekutsvaga mazita, mitengo, zvigadzirwa nezvimwe zvakawanda.
Chinangwa chekutsvaga webhupu
Usati watsvaga mapeji akasiyana-siyana ewebhu, vashandisi vanoda kuva nemafungiro akajeka pamusoro pokuti chii chaizvo web scraping inoshandiswa. Izvozvo zvinoreva kuti kubvisa webhutori ndiyo nzira yemazuva ano iyo inogona kubatsira vatungamiri kuwana zvese zvavanoda kuburikidza vachishandisa mapurogiramu akasiyana-siyana emakombiyuta. Nenzira iyo vanogona kubvisa deta nenzira iri nyore uye pasina kushandisa nguva.
Makore akawanda apfuura, vanhu vaifanira kubvisa zvose data kubva pawebsite. Yakanga isiri nzira iri nyore kubva web scrapers yaifanira kupedza maawa mazhinji kana mazuva, kuitira kuti vawane zvavanoda. Asi chaiva chinhu chisingaitiki kune vakawanda vekutsvaga webhu uye vanogadzira mapurogiramu nokuti yakanga isiri yakabudirira.
Nzira Itsva uye Yakashandurwa
Kugadzirwa kweWebhu chinhu chikuru chinogona kupa mitezo yakaisvonaka kune vashandi varo pasina nguva. Zvechokwadi, vanotsvaga webhuva vanogona kuwana yese data yavanoda nechokungofa chete. Vanogona kuchengetedza nguva nesimba, pamwe nekuziva kuti vanozobvisa matanho chaiwo avanoda pasina zvikanganiso. Mumaminitsi mashomanana, vanogona kugadzira mapeji akawanda emagetsi uye kuwana mhinduro dzinodikanwa.
Zvigumisiro zvinobudirira neKinongedza kechigunha
Nenguva pfupi yebhatani, vashandi vanogona kuongorora webhusaiti uye vane zvinoguma zvavanoda. Haafaniri kuenda kunze uye kuita chero kushambadzira kwemashamba. Pane kudaro, vanogona kuwana ruzivo rwavanoda kubva kumakombiyuta avo.
Makombiro ekugadzira zvinyorwa zvepaIndaneti nhasi
Nzira yekutsvaga kwekutsvaga webhutori yakakosha kune vanhu vanoita zvemabhizimisi. Vanogona kutora uye kuchengetedza zvakawanda zvezviri mukati mavo pasina nguva uye vanozvichengeta mumafaira. Icho chinhu chikuru chisina kukanganisa kushandiswa kwemigodhi iyo inopa mikana inoshamisa kuvashandi vayo.
Kugadzirwa kweWebhu kwakave nzira yakakurumbira zvikuru kunyanya vanotengesa e-mabhizimusi uye avo vanobatsirana navo. Inogona kuitwa nyore nyore uye inopa mukana kune vatungamiri uye shamwari kuti vaongorore mitengo nemitengo zviri nani. Kushandurwa kweWebhu kunoitwa nepurogiramu yekombiyuta, iyo inoshandisa zvidzidzo zvishoma kuti ibvise zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite Source .